musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Vanhu vazhinji vakakuvadzwa muRussia kuputika kwebhasi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • nhau • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuputika kune simba kwakaitika apo ivo vafambi vaikwidza bhazi pane chiteshi chebhazi nenzvimbo hombe yekutengesa.
Vanenge vanhu makumi matatu vaive mubhazi panguva yekuputika.
Kuputika kwakaitika apo vafambi vaikwira bhazi.
Kuputika kwakaitika panzvimbo yemabhazi nedhorobha nzvimbo yekutengesa.
Kuputika kwakaitika mudhorobha reVoronezh mukupera kweChina manheru
Bhazi revapfuuri rakaputika muguta reVoronezh iri pakati peRussia.
Mavhidhiyo anobuda kubva panzvimbo yekuputika anoratidza bhazi rakabvarurwa nekuputika.
Mifananidzo inotenderera pamhepo inoratidza kuti bhazi rakakuvara zvakanyanya nekuputika, neepaneru remuviri uye nedenga rakabvaruka.
Sekureva kwenhau dzemuno, vanhu vazhinji vakakuvadzwa mukuputika uku.
Kuputika kwakaitika mudhorobha reVoronezh mukupera kweChina manheru.
Kuputika kune simba kwakaitika apo vafambi vaikwidza bhazi panomira bhazi nechitoro chikuru.
Vanenge vanhu makumi matatu vaive mubhazi panguva yekuputika, mutyairi, uyo akapona pakuputika, akaudza vezvenhau vemuno.
Vanhu vanosvika gumi nevaviri vakakuvara mukuputika uku, kusanganisira mumwe mukadzi akabviswa makumbo, nhepfenyuro yemuno yakataura, ichitora zvinyorwa.
Mutevedzeri gavhuna wedunhu reVoronezh akaudza vezvenhau kuti hugandanga hausi pakati peshanduro dzinoonekwa nevakuru panguva ino yekuferefeta.